Rindrambaiko Visme Online Design Famerenana
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Famerenana Rindrambaiko Visme Online Design 2021
Famerenana Rindrambaiko Visme Online Design 2021
By Eva Williams, Mathis Ravatomanga 2021-09-09, Malagasy Blog
Sehatra: Misy miaraka amin'ny fanohanan'ny mpitety tranonkala
Vidiny: Maimaim-poana na amin'ny $ 15/volana
Didim-pitsarana: Rindrambaiko Visme Online Design dia mpamorona atiny anaty maso an-tserasera izay manampy anao handanjalanja sy hifehezana ny fampisehoana sy ny fanovana ny angona fampahalalana sy haino aman-jery ho lasa infografika mahaliana sy fampisehoana ifanakalozana, mifototra amin'ny loharanom-baovao rehetra. Miaraka amin'ireo maodelim-pijerena matihanina azy, na dia ny vao manomboka aza dia afaka mamorona endrika marobe ho an'ny vokatra marika matihanina, manomboka amin'ny endrika an-tserasera ka hatramin'ny antontan-taratasy pirinty: afisy, bokikely, karatra fandraharahana, sora-baventy fanaovana dokam-barotra.
Na dia ivelan'ny Internet aza, ity fitaovana miorina amin'ny tranonkala ity dia ampiasain'ny matihanina amin'ny sehatry ny fanabeazana, marketing ary fitantanana. Visme dia matanjaka ampy ho an'ny mpamorona sary. Izy io dia manambatra ny fahatsoran'ny drag-and-drop, ny fahalalahana ary ny fiasa mifandraika amin'ny famoronana votoaty mahaliana ny mpijery.
Fampisehoana sary, sary/tabilao
Fampiasana an-tserasera, fampidirana amin'ny MS Office
Fiarovana, fiainana manokana, fifehezana fidirana
Mitarika ny taranaka, tatitra momba ny hetsika, marketing amin'ny haino aman-jery
Ny fiaraha-miasa dia tsy misy raha tsy amin'ny drafitry ny ekipa
Mamoaka an-tserasera, apetraho amin'ny tranokala na sintomina hampiasaina ivelan'ny Internet - Visme manova ny fomba fifanakalozana endrika endrika. Amin'ny maha-sehatra fiaraha-miasa mifototra amin'ny rahona azy, mamela ny mpitantana handamina ny tetikasan'izy ireo ao anaty lahatahiry, manasokajy sy manasokajy ny rakitra ao anaty tahiry, manamboatra fifehezana fidirana, manome alalana mifototra amin'ny andraikitra amin'ny vondrona na olona mifandraika amin'izany.
Ny sehatra dia manome fahaiza-manao mandeha ho azy amin'ny famoahana atiny an-tserasera, famoahana, fampisehoana ary fizarana atiny. Mamela anao hametra fotoana amin'ny fampandehanana automatique fampisehoana an-tserasera sy ho an'ny analytics hanarahana ny fahombiazan'ny famoahana.
Famerenana Lozisialy Visme Online Design Software
MAMPIASÀ VISME MAIMAIMPOANA
Ny fanaovana tantara an-tsary dia fomba iray handefasana angona sy hevitra amin'ny alàlan'ny haino aman-jery maso izay ahafahanao mihetsika amin'ny sary, sary, sary, sarimiaina ary horonan-tsary. Ny filan'ny marketing amin'ny atiny momba ny sary mahasarika sy mitahiry saina dia ilaina amin'ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing. Manampy ny mpivarotra hanatsara ny fifanakalozana sy ny fampahatsiahivana ny doka izany, hampitombo ny ROI ary hahatratra ny mpihaino azy.
Ny mpivarotra dia manintona ny angona ho toy ny fanadihadiana ataon'ny mpanjifa mety satria afaka mitantara tantara tsara izy io. Noho izany, ny infografika sy ny fampisehoana dia iray amin'ireo fitaovana tiana indrindra amin'ny fanaovana tantara an-tsary, na lahateny amin'ny fihaonambe na hetsika tambajotra, fampisehoana valiny amin'ny fitantanana, na tolo-barotra. Visme as an infographic maker mahafeno ny filàna sy ny fahaizan'ny famolavolana, noho izany ny fanaovana fampisehoana dia lasa ampahany mora indrindra amin'ny fanomanana anao.
Modely sy lohahevitra ary endrika an-tsary mihetsiketsika an'arivony maro an'arivony
Mba hahazoana antoka fa manana endrika tsy manam-paharoa sy manintona ny fampisehoana nataonao, manolotra modely sy lohahevitra fampisehoana 100+ i Visme miaraka amina endrika madio, mamorona ary maoderina. Ny maodely Visme namboarina dia mety amin'ny fampisehoana izay mifanaraka amin'ny tanjona: fizarana, fampitahana, fandaharam-potoana, tatitra ary tabilao, fampahalalana, ambaratongam-pahefana ary torolàlana. Azonao atao ny misafidy modely miorina amin'ny teny lakile: anatomie, orinasa, varotra, sns.
Raha mila fampisehoana marobe ianao amin'ny tanjona samihafa miaraka amin'ny fijery mitovy amin'izany, tonga lafatra ho anao ny lohahevitra. Ao amin'ny lohahevitra mahazatra an'ny online slideshow maker, hahita rindran-tsary miisa 400+ ianao, ary amin'ny lohahevitra maoderina - 900+ fisehoan-tsary mihetsika mifanentana amin'ny fahitana fampisehoana nataonao. Azonao atao ny mamorona ny fombanao manokana amin'ny fikarohana sary, sary, data ary haino aman-jery ao amin'ny tranomboky, na amin'ny alàlan'ny fampakaranao ny atiny anao manokana.
Fikirana malefaka miaraka amin'ny fanaraha-maso Granular amin'ny atiny
Miaraka amina masontsivana feno sary - sary an-tapitrisany, widgets, lohateny, endritsoratra, kisary, fiaviana an-tapitrisany - misy fitaovana lehibe ahafahanao manamboatra ny atiny navoaka araka izay azo atao. Ireo fitaovana ireo dia ahafahanao manafatra atiny avy amin'ny antoko fahatelo ary manitsy azy amin'ny alàlan'ny modely misy.
Azonao atao ny mamela ny layout grid mba hampifanaraka ireo singa sy hanampy hitarika ny sisin-tany. Aza misalasala mametraka ny toerana sy ny zoro ny sary. Amin'ity fomba ity, rehefa manandrana mampifanaraka singa samihafa ianao dia mahomby hatrany.
Azonao atao ny mamindra sy miverina ny singa, mifehy ny mangarahara, mampihetsika ireo singa mba hisehoan'izy ireo eo amin'ny sehatry ny fijery rehefa tianao izany. Raha tokony hisafidy loko misy tsindry ianao dia asio kaody hexadecimal na ampifanaraho ny famirapiratanana/haizina hahitana ilay tadiavina.
Fitaovana fitarihana mitarika sy Analytics momba ny fijerena sy ny fifanakalozana
Mila manombatombana ny fahombiazan'ny atiny navoaka ianao mba hanovana ny webinar sy tetikasa hafa mifototra amin'ny tsikera sy traikefa an'ny mpanjifa. Ny Analytics dia manampy anao hanara-maso ny isan'ireo mpitsidika tsy manam-paharoa, ny atiny be mpijery indrindra, ary ny fotoana lanin'ny mpampiasa tsirairay. Ny mpitantana dia afaka mampakatra an'ity angona ity ho toy ny tatitra ao amin'ny Excel na toy ny kisarisary mifampiresaka mifototra amin'ny latabatra data nohavaozina.
Ny sehatra dia azo ampiasaina hisarihana ny mpanjifa mety. Mamorona webinar efa voarakitra mialoha na fampisehoana interactive mba hamoronana lisitry ny adiresy mailaka amin'ny alàlan'ny fizarana izany amin'ny mpihaino anao ary hahafahanao misafidy ny fisoratana anarana. Io dia hahafahanao manangona fampahalalana mifandraika amin'ireo liana amin'ny atiny manokana anao.
Azonao atao ny mijery ny valin'ny form anao ao anaty bara fampitaovana handefasana data ao amin'ny CRM na sehatra e-marketing.
Kitara marika hanandratana ny orinasanao
Ao amin'ny Visme dia afaka mamorona kit marika feno ianao ao amin'ny kaontin'ny orinasanao: loko, endritsoratra, logo, sns. Atao amin'ny Internet ny fampisehoana, ka mijanona eo amin'ny toerany ireo endritsoratra voafantina izay nampakarinao. Azonao atao ny mampakatra sary sy lohahevitra maro loko amin'ny famolavolana fampisehoana, ary hijanona ao amin'ny lisitry ny fisafidianana loko izy ireo mba hidirana mora foana.
Ny kitanao marika dia misy faritra iray amin'ny fampidirana modely izay ampiasainao matetika amin'ny orinasanao, rakitra logo maromaro, ary koa rohy fidirana haingana ho an'ny tranonkalanao sy ireo sehatra media sosialy. Endri-javatra mahafinaritra iray hafa dia ny tranombokin'ny sary mihetsika farany izay matetika ampiana amin'ny fampisehoana.
Andao hatao hoe namorona fampisehoana marobe ianao fa nanova ny Twitter-nao sy ny Instagrams anao nandritra ny fizotran'ny rebranding. Tsy mila mijery ny fampisehoana tsirairay ianao vao manavao ity vaovao ity. Mandehana any amin'ny tranombokinao slide, ahitsio eo ny fampahalalana, ary hanolo azy ireo ho azy ireo marika taloha ao amin'ny fampisehoanao tsirairay.
Ny fifandraisana dia mitondra ny atiny ho amin'ny fiainana
Na mampiantrano fampisehoana mivantana na mampiditra sary mihetsika amin'ny tranokala ianao dia afaka mamorona rohy, bokotra miantso-mihetsika, pop-up, manodidna, mivezivezy manodidina ny famelabelarana ary manampy endri-pifandraisana hafa ahafahan'ny mpihaino mifandray. ny atiny. Ny varavarankely hyperlink, slide na pop-up dia fomba tsara iray hampandraisana andraikitra ny mpihaino anao sy hanomezana endrika mampifandray, toy ny famoronana quiz na fanontaniana/valiny amin'ny fampisehoana iray.
Manampy hafatra video/audio, fampidirana atiny an-tserasera amin'ny slide dia mora nefa tsy misy vahaolana. Ny fanampiana audio dia ahafahanao mampakatra rakitra audio na mirakitra feo mivantana amin'ny slide. Endri-javatra iray hafa dia ny fahaizana mamorona infografika animated interactive. Visme no alternativa Canva tsara indrindra, noho izany dia azo atao ny mamorona infographic tokana amin'ny endrika lava miova rehefa mihodina ianao. Mba hanaovana izany dia mila manondrana/mamoaka azy ho infographic HTML5 ianao.
Ny tena mahavariana dia ireo sary mihetsika izay tafiditra ao anaty sokajy telo: sary, marika ary fihetsika. Ny endri-tsoratra dia mety ho olona miakanjo mahazatra na matihanina, mascots na bot. Ampidiro ao amin'ny tetikasanao ilay mpilalao ary hihetsika izy ary hanofahofa ny tanany.
Fizarana sy famoahana ambaratonga manaraka
Miaraka amin'i Visme, afaka mizara votoaty amin'ny sehatra media sosialy ianao, mamoaka atiny an-tserasera amin'ny tranokala hafa, na manaova azy manokana, mametraka azy ao anaty kaody noforonina tao amin'ilay tranokala, na mampakatra azy hampiasaina ivelan'ny Internet amin'ny endrika isan-karazany. Izay mahazo ny URL dia afaka mijery ny tetikasa ho tranonkala na dia tsy manana kaonty aza. Ho azo jerena amin'ny fitaovana rehetra ny tetikasa, ary afaka mahazo analytics momba ny fomba fijery ianao.
Azo atao ny mandefa fampisehoana ho an'ny fanitsiana, fanehoan-kevitra ary hijerena fotsiny. Azonao zaraina amin'ny olona manokana amin'ny anarany, ny adiresy mailaka, na vondron'olona ao amin'ny tarika ekipanao. Azonao atao ny mametraka ny fahazoan-dàlan'ny mpampiasa: omeo ny fidirana amin'ny fanovana amina vondrona mpitantana ary ny fahazoana mijery irery amin'ny vondron'ireo mpampiasa mahazatra ao amin'ny ekipanao
Raha namorona fampirimana fampisehoana ho an'ny lohahevitra manokana na karazana tatitra ianao dia azonao zaraina mora foana amin'ireo mpiara-miasa aminao. Ankoatr'izay, Visme dia manolotra fampiasa fampidinana HTML5 ho an'ny fampisehoana an-tserasera, izay ilaina rehefa mandray fampisehoana amin'ny toerana tsy azonao antoka ny fidirana Wi-Fi ianao.
Ny tabilao 50, Widget ary sarintany dia manampy amin'ny fitantarana tantara iray miaraka amin'ny angona
Ny fampidirana ny tabilao sy ny kisary amin'ny fampisehoana ataonao dia fomba tonga lafatra hanoloranao angona amin'ny fomba hita maso sy hanoloranao hevitra mandresy lahatra ny mpihaino anao. Ny fampisehoana sary an-tsary momba ny fandefasana ny fikarohana, ny statistika ary ny vaovao farany dia hampahafantatra anao amin'ny fomba mahomby. Azonao atao ny manomboka amin'ny slide vonona avy amin'ny iray amin'ireo lohahevitra. Ao no hahitanao radial, fomba fijery statistika, thermometre, bara fandrosoana, histograms, kisary andalana sy maro hafa.
Aorian'ny fisafidianana ny fitaovana fanaovana sary ho angon-drakitra, hiseho ny Engine Engine, hamela anao hanamboatra ny tabilao na ny sary. Manampia data amin'ny tanana omena amin'ny faritra omena na ampidio avy amin'ny takelaka Google na Excel. Avy eo havaozy ny toe-javatra hanamboarana ny mombamomba ny axis sy maro hafa.
Visme dia mamelona ho azy ny singa amin'ny tabilao tsirairay mba hahasarika ny sain'ny mpihaino anao. Azonao atao ny misafidy safidy safidy sary mihetsika efatra na hanafoanana azy.
V Vidin'ny Rindrambaiko Visme Online Design
Amin'izao fotoana izao dia misy ny kinova Visme maimaim-poana izay manolotra fampiasana voafetra an'ny mpampiasa tokana miaraka amin'ny fanampiany ny marika Visme amin'ireo tetikasa. Raha tsy te-hiaritra amin'ireo zava-tsarotra ireo ianao dia mividiana drafitra Standard isam-bolana amin'ny $ 15/volana ho an'ny fampiasana tsirairay miaraka amin'ny antoka ny fanavaozana, ny fanohanana ara-teknika ary ny famerenam-bola. Ny drafitra fandraharahana manomboka amin'ny $ 29/volana dia hanampy ny fidirana premium rehetra, ny marika, ny SEO ary ny fitaovana fiaraha-miasa.
Raha mila filaminana fanampiny ianao ary ireo toe-javatra mandroso indrindra miaraka amina tetikasa tsy manam-petra, azonao atao ny mangataka drafitra Enterprise, izay mifampiraharaha tsirairay ny vidiny. Misy fihenam-bidy ho an'ny toerana 10 na maromaro.
Visme Online Design Software Famerenana